ဖြတ် porn: porn ပြဿနာကိုအသိအမှတ်မပြု | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ Porn ဖြတ် porn နှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုအသိအမှတ်မပြုဖို့ကိုဘယ်လို
သင်သို့မဟုတ်သင်နှင့်နီးစပ်သူတစ်ဦးဦး porn နှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရှိသလား ဤအပိုင်းကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လျှင်တရားစီရင်ခြင်းငှါလေးနည်းလမ်းများပေးထားပါတယ်။
၏ပထမဦးစွာရောက်ရှိ အကျဉ်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Screener တစ်ဦး 80% ယုံကြည်စိတ်ချရအတူဆင်းသာငါးခုမေးခွန်းများရောဂါရိုးရှင်းသောသိရသည်။ သင့်အနေဖြင့်စမ်းသပ်စမ်းသပ်မှုကိုယ်နှိုက်ကို အသုံးပြု. အဘို့ညွှန်ကြားချက်တွေ့လိမ့်မည်။
ဒုတိယအချက်မှာရိုးရှင်းဗီဒီယိုကိုလည်းမရှိ စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း သငျသညျ, Reboot နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဂါယူဆပါသည်၏ယဉျကြေးယူနိုင်ပါတယ်။
တတိယအချက်အောက်တွင်ပြ Porn စားသုံးမှုစကေးရှိပါတယ်။ ဒါဟာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ပြင်းထန်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။ Self-အကဲဖြတ်များအတွက်စကေးကိုသုံးပါဒါမှမဟုတ်သူတို့ထိခိုက်လျက်ရှိသည်လျှင်ကြည့်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်။
စတုတ္ထလူတို့သညျသူတို့ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသူတို့ရှိစေခြင်းငှါမဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေမဖော်ထုတ်ရန်ကူညီဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုကိုယူနိုင်ပါတယ်။ ဤတွင်ဖြစ်ပါသည် အမျိုးသားများအတွက်များအတွက်လိင်စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်ခြင်း.
အောက်ပါဇယားအခြို့သော Self-အကဲဖြတ်လမ်းညွှန်မှုအထဲကသတ်မှတ်။ ဒါဟာသင်နှင့်သင့်ပတ်လည်လူမြားအပျေါပေါစေခြင်းငှါ porn စားသုံးမှုနှင့်သက်ရောက်မှုများအဆင့်ဆင့်ဖုံးလွှမ်း။ ဒါဟာတိုင်းအခွအေနေကိုဖုံးလွှမ်းရန်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်, သင်မူကား porn သင်၏အသက်တာအတွက်ကြောင့်ပြဿနာကိုဦးဆောင်ပြုလုပ်လျှင်ဘယ်မှာစဉ်းစားကူညီသင့်ပါတယ်။
သငျသညျစားသုံးကြသည်ဘယ်လောက်ညစ်ညမ်းအကဲဖြတ်ရန်သာကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အတူပင်လျှင်, ရိုးရိုးသားသားစကားပြောဆိုမှုတောင်းဆိုနေပြီ။ အဆိုပါဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအတွက်စစ်မှန်တဲ့အဖြေကိုအဘယ်မှာရှိသနည်း ကော်လံ။
porn ဖြတ်နှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့မစစ်မှန်ဘက်ကိုရှိကွောငျးသတိရပါ။ သင်ကမကျော့မိဖြစ်လာကြပါပြီ, သင်၏အသက်တာ၌သင်တို့ကိုမှန်ကန်ပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နှင့်သင်သည်သင်၏အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်လို့မရဘူးထွက်လှည့်လျှင်သင်ရပ်တန့်ဖို့အကူအညီလိုပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါပြန်လည်နာလန်ထူကာလကျောက်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြန်လည်ကူညီပေးဖို့သင်တို့အဘို့အမရရှိနိုင်ပါကအကူအညီအများကြီးရှိပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့နီးပါးဟောင်းအားလုံးရဲ့အသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းသူတို့၏အသက်တာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းရပ်ပြီးနောက်အသက်တာကိုအလွန်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရှာပါ။ ယနေ့ Begin!